Nepali Keti Ko Chikai: जय होस स्वास्नीमान्छेको
हरेक मान्छेको आ आफ्नो प्रकृति हुन्छ र हरेकले आ आफ्नै प्रकृति अनुसार ब्यावहार गर्ने गर्छन । जस्तो कि मलाई बोल्नै मन पर्दैन । निक्कै घनिष्ट हुनेहरु बाहेकका अरुसंग म ज्यादै कम बोल्छु । धेरैले भन्छन बोल्नुपर्छ । बोलीमै सबैथोक हुन्छ । बोलीचाली मिठो भए सबैकुरा मिठो हुन्छ राम्रो हुन्छ , बोलीचाली रुखो भए सबै कुरा नमिठो नराम्रो हुन्छ तर म यो कुरा पनि मान्न तयार छैन बोलीमा के नै हुन्छ र ? अकारणमा कसैलाई गाली गलौज गरेर त कोहि पनि बोल्दैन तर अगाडी चेपारे घसेर या नि कि पल्ला पारेर पछाडी कुरा काट्नेहरु भन्दा बरु नबोल्नेहरु नै जाती लाग्छ मलाई । यो यसकारण पनि हुन सक्छ कि म आफु ज्यादा बोल्दिनं र अरुले अनावश्यक बकबक गरेको पनि मन पराउंदिन म । आवश्यकता भन्दा ज्यादा बोल्ने आवश्यकता कहिल्यै देख्दिनं म ।
केहि हफ्ता अगाडी संगै कामगर्न यौटी केटी आएकि थिई । केटी भनुँ या आईमाई उमेरमा भर्खर २६/२७ कि होली तर बिवाहित । उसको सुन्दरताको त बर्णनै नगरुं , बिछट्टै सुन्दरी छे । संगै काम गरेको ५/६ दिन सम्म पनि हाई हेल्लो भन्दा ज्यादा बोलेको थिईनं म । उसलाई अति नै ज्यादा बोल्नुपर्ने । मुखै नबिसाई एकोहोरो बोलिरहनु पर्थ्यो उसलाई । म उ संग नबोलेको बारेमा उसले अरुसंग गुनासो गरेको पनि थाहा पाईसकेको थिएं मैले । मलाई आपत्ती थिएन । उ जति नै ज्यादै बोलोस , म सुन्न तयार थिएं तर मेरो बारेमा अनावश्यक नकारात्मक धारणा बनाउंदा भने मलाई त्यो अपच नै हुन्छ । मेरो बारेमा उसले नकारात्मक धारणा राखेको मैले थाहा पाईसकेर पनि प्रतिकारमा उसलाई केहि भन्ने मौका नै परेको थिएन ।
काम गरिरहेको एकदिन उसले मलाई भनी , ‘ हिजो राती अलि धेरै पिए जस्तो छ नि ? ‘
‘ तिम्रो गिदीमा किरा परेको छ ? ‘ मैले उल्टो प्रश्न गरें । उसलाई रिस उठ्नु स्वभाविक थियो । रिसाएर मलाई ठाडै खाउंला झैं गर्दै बोली उ , ‘ के भनेको तिमीले ? के म पागल जस्तो लाग्यो तिमीलाई ? जंड्याहा , काम गर्दा पनि मातेर आउंछ अनि अरुलाई जे पायो तेहि बोल्छ । ‘ उसको बाझ्ने कला तारिफ लायक थियो ।
‘ मैले हिजो राती धेरै पिएको तिमीले कसरी थाहा पायौ ? ‘ प्रश्न गरें मैले ।
‘ तिमी बोल्दैनौ नि त । अरु सबै बोल्छन , तिमी बोल्दैनौ त्यसैले मलाई त्यस्तो लाग्यो । ‘ ओठे जवाफ फर्काई उसले ।
‘ नबोल्नुलाई पिएको छ भन्ने अर्थ लगाउनु पनि मलाई गिदीमा किरा परेको जस्तो लाग्छ ।’ मैले भनें ।
केहिबेर उ चुप भई । फन्केर यता र उता गरी र मेरो छेउमा आएर खाजा सामल कसेर बाझ्न थाली उ , ‘ तिम्रो गिदीमा परेको होला स्याउंस्याउंती किरा । त्यसैले तिमी मलाई त्यसो भन्दैछौ । मलाई त नबोल्ने मान्छेहरु घुसघुसे हुन्छन जस्तो लाग्छ । ‘
‘ मलाई पनि धेरै बोल्ने आईमाईहरु बाईफाले हुन्छन जस्तो लाग्छ । ‘ मलाई ठिक्कै जवाफ आयो ।
‘ बाईफाले भनेको के हो ? ‘ बुझेर हो या नबुझेर उसले बाईफालेको अर्थ खोजी ।
‘ घुसघुसे भनेको के नि ? ‘ मैले बुझिबुझि घुसघुसेको अर्थ सोधें ।
‘ घुसघुसे भनेको बाहिर नबोलेर सोझो जस्तो देखिने तर भित्रभित्रै अर्काको नराम्रो गर्ने मान्छे हो । ‘ उसले अर्थ लगाई ।
‘ बाईफाले भनेको चाहिं अनावश्यक पतरपतर बोल्ने अनि खुल्लमखुल्ला चरित्रले तल गिर्ने आईमाईहरु हुन । ‘ मलाई पनि अर्थ लगाउन कर लाग्यो ।
हामी दुईको झगडाले उग्ररुप लियो । संगै कामगर्ने साथीहरु हामीलाई सम्झाउन आउंथे । सानो कुरामै हामीबिच झगडा परेपनि यौटा कुरामा भने हामी समान रहेछौं । मलाई जस्तै उसलाई पनि अरुले सम्झाउन आएको मन नपर्ने रहेछ ।
संगै कामगर्दा पनि नबोलेरै अरु एक हफ्ता बित्यो । बोल्नुपर्ने अवस्था आउंदा हामी झगडा गरिहल्थ्यौं ।
बिदाको एकदिन म सुमनलाई भेट्न उसको कोठामा गएं । सुमन , त्यो नयाँ केटी - अञ्जली र निशा तिनजना एउटा अपार्टमेण्टमा बस्थे । तिनैजना हामीसंगै काम गर्ने । सुमनको र मेरो बिदा संगै पर्थ्यो । सुमन मैले स्कूल देखि नै चिनेकि साथी । संगै बिदा पर्ने भएकोले सुमन र म बिदाको दिन प्राय संगै हुन्थ्यौं । त्यसदिन म सुमनको कोठामा पुग्दा कोठामा सुमन नभएर त्यो अञ्जली थिई । आज नेपालतिर फोन गर्नुपर्ने भएर आफ्नो शट्टा सुमनलाई काम गर्न लगाएर उ बिदा बसेकि रहिछे । कोठामा मलाई देखेर उ मसंग ठाडै झगडा गर्न आउली जस्तो लागेको थियो तर यो पटक म गलत भएं ।
त्यसदिन ज्यादै नम्रता र शिष्टताका साथ मेरो सत्कार गरी उसले । त्यसदिनको उसको बोल्ने शैली र ब्यावहारमा आकाश पातालको फरक पाएं मैले । उसले चिया बनाएर ल्याई । चिया पिउंदै गफ शुरु गर्यौं हामीले । गफै गफमा उसले भनी , ‘ तिमीलाई मान्छे हेरेरै मान्छेको नेचर कस्तो छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ ? ‘
कहाँ थाहा हुनु मलाई मान्छे हेरेर मान्छेको नेचर । न मैले मनोविज्ञान पढेको न कहिल्यै कसैको अनुहार हेरेर त्यसको नेचर कस्तो छ भनेर अवलोकन नै गरेको ।
‘ कसरी थाहा हुनु र ? हुंदैन । ‘ मैले सरल जवाफ दिएं ।
‘ एनि वे , तिमीले मलाई बाईफाले भनेको मन नपरे पनि थाहा पाएरै भने जस्तो लाग्यो । त्यसबेला त रिस उठेको थियो तर पछि सम्झंदा ठिकै भनेको होलाउ जस्तो लग्यो ।’ उसले एकप्रकारले म बाईफाले नै हुं भन्ने स्विकार गरी । आजको उसको पहिरन पनि उस्तै थियो । हुनत अक्सर केटीहरुको एक्लै घरबसाईको लवाई यस्तै हुन्छ । मैले संगत गर्न भ्याएसम्म केटीहरु प्राय पातलो र ज्यादै कम कपडामा घरमा बसिरहेका हुन्छन । उसले कालो कटनको पुरा बाहुलाको शर्ट लगाएकि थिई । छातीमा बटन खुल्लै भएकोले उसको स्तनहरु चल्दा चटपटाउंदा देखिन्थे । भित्रबाट ब्रा नलगाएको प्रष्ट हुन्थ्यो भने तल सायद पेण्टीमात्र लगाएकि हुंदी हो । लामो शर्ट भएकोले झट्ट हेर्दा आपत्तीजनक लाग्दैनथ्यो । त्यसो त उसले हाफ पाईण्ट नै पनि लगाएकी होली तर हेर्दा त्यस्तो लाग्दैनथ्यो ।
‘ तिम्रो त केटी साथीहरु छैनन जस्तो छ नि ? केटीबिना कसरी बस्न सक्छौ ? म त सक्दिन यार …………..’
एक्कासी उसको प्रश्नले मलाई अन्यौलमा पार्यो । भन्न के खोजेकि हो उसले ? यहाँनेर मैले उसलाई बुझ्न कठिन महसुस गरेको भएता पनि उसको त्यसक्षणको ब्यावहारले उसले मलाई सेक्स अपिल गर्दैछे भन्ने थाहा पाईसकेको थिएं । उसलाई चिनेजानेको धेरै पनि भएको थिएन तसर्थ मैले यसबेला अलि सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो । मानसिक हिसाबले म उ संग बिदा भएर बाटो तताउन तयार भै सकेको थिएं । म अब जान्छु भन्नै लाग्दा उसले म संग टाँसिएर बस्दै भनी, ‘ मेरो फोटो अल्बम हेर्ने हो ? ‘
मलाई एकप्रकारले गार्हो महसुस भयो । मैले आजसम्म यसरी हलुका चिनजान भएका केटीहरुसंग यसरी संगै टाँसीएर बसेको थिईनं । मैले हेर्ने हो या हेर्ने हैन भन्नै नपरी उसले अगाडी टेबलमा उसले उसको फोटो अल्बम फैलाई ।
म उसको अल्बमको पाना पल्टाउन थालें । मैले पल्टाउन भ्याएसम्म उसका सबै तस्विरहरु अश्लिल थिए । मैले भनें , ‘यस्तो तस्विरहरु किन यसरि राखेको ?’
‘ किन ? के फरक पर्छ र ? ‘ उसले मलाई प्रतिप्रश्न गरी । म त उसलाई सोध्दै पो थिएं उसको प्रश्नको जवाफ म संग कहाँ हुनु र ? मैले केहि भनिनं ।
सायद मेरो मौनतालाई उसले उसको अपिलप्रतिको अनुमति ठानी , अकस्मात उ मेरो काखमै बस्न आई र भनी , ‘ मलाई तिमी मनपर्छौ । असाध्यै मनपर्छौ । हामी साथी बन्न सक्छौं ? ‘
‘साथी नै त हौं नी हामी , हैनौं र ?’ मैले उ बाट अलिपर सर्दै भनें ।
‘मैले नजिकको साथी भनेको नि । संगै रमाईलो गर्ने के । लाईक सेक्स पार्टनर के । हाम्रो आआफ्नो बाटो त छंदैछ । जिन्दगीमा केहि रमाइलो पनि त हुनुपर्यो नि , हैन र ? यति टाढा आएर बसेका छौं हामी ।’ उसको बोलाईमा दम थियो । म त के मैं हुं भन्नेहरुलाई पनि आफ्नो बसमा पार्ने खुबि थियो उसमा । अहिले म दोधारको स्थितीमा थिएं । एकमनले लाग्थ्यो जब केटीहरु नै यसरी अगाडी बढेर सेक्स अपिल गर्छन भने मैले कमजोर भएर पछि हट्नु हुंदैन । अर्को मनले लाग्थ्यो यो पतनको बाटो हो मैले यसरी नैतिकतालाई बन्दकी राखेर जो आयो तेहि संग शारिरिक सम्पर्क राख्नु हुंदैन ।
अञ्जली संग यसरी अकस्मातको भेटमा सोच्दै नसोचेको परिस्थिती अगाडी आउंदा म मा एक प्रकारको जोस आएको थियो । उसलाई त्यही सोफामै सुताएर उ संग शारिरिक संसर्ग गरुं जस्तो लाग्दैथ्यो फेरी त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि थियो । उ निक्कै अगाडी बढिसकेकि थिई । आफ्नो स्तन मेरो छातीमा दल्दै मलाई चुम्बन गर्न तम्सिरहेकि थिई उ ।
आफु दोधारे स्थितीमा भएकोले मैले उसलाई चुम्बनमा न त पुरा साथ दिन सकिरहेको थिएं न त उसलाई छोडेर हिंड्न नै ।
कतै मैले सुनेको थिएं आईमाईहरु लोग्ने मान्छेले भन्दा दुई गुणा बढि खाना खन्छन , चार गुणा बढि लजाउंछन , छ गुणा बढि साहसी हुन्छन अनि आठ गुणा बढि कामुक हुन्छन । यस्तो नहुन पनि सक्छ तर अञ्जलीलाई देख्दा भने मलाई यस्तै हुंदोरहेछ भन्ने लाग्यो । सहसा म उसको स्तनसंग खेल्न लागीसकेको थिएं । मैले अनुमान गरे अनुशार नै उसले शर्टमात्र लगाएकि थिई तल उसका पोटिला तिघ्राबिचमा यौटा सानो डोरोमात्र भएको कट्टु थियो । त्यस्लाई सायद थङ्ग भन्छन क्यार ।
मैले आफ्नो हात उसको योनिभाग तर्फ मुसार्दा उक्त थंङ्गको डोरो योनिमा धसिएको थियो । सायद यसरि डोरो योनिमा धसिनु नै यो लगाउनुको मज्जा होला नत्र भने त्यसले न केहि छेक्थ्यो न कट्टु लगाएको जस्तो हुन्थ्यो । अर्को कुरा थंङ्ग लगाउंदा अकस्मात सेक्स गर्नुपर्ने स्थिती भै परि आउँदा खोलिरहनु नपर्ने भन्ने पनि होला । डोरोलाई यसो पन्सायो बस काम तमाम ।
एकाएक म अञ्जलीसंग सहबासको लागी तयार भै सकेको थिएं । मैले उसलाई समाएर बिस्तारै सोफामा पसारें र उ माथी चढ्ने क्रममा लागें । उ यस्तरी सन्चो मानिरहेकि थिई कि मानौ उसको बर्षौंको सपना साकार हुन गै रहेको छ । जब मैले उसको योनिको पोटिलो दुईगालाको बिचमा धसिएको डोरो आफ्नो औंला गाडेर निकालें र थंङ्ग फुकाल्न खोजें उ आत्तिएझैं मलाई धकेल्दै उठी र ढोका लक गरेको छैन भन्दै कोठाबाट बाहिर निस्किई ।
मेरो दशा त्यसबेला हेर्न लायक भएको थियो । म जुरुक्क उठें मेरो लिंग कडा भएर र्‍याल चुहाउंदै थियो । मलाई आफु यत्तिकै प्यासी नै रहन्छु भन्ने लाग्यो ।
लोग्ने मान्छे पनि यौनको मामलामा आईमाई भन्दा पछि कहाँ हुन्छन र ? मैले जुनसुकै हालतमा अन्जली संग संभोग गर्ने अठोट गरेर उसको पछि लागें । मलाई उसले अरु केहि गर्न दिन्न होला भन्ने लाग्दैथियो तर उ साँच्चै ढोका लक गर्नै गएकि रहिछे । म ढोकामा पुग्दा उ फर्कंदैथिई ।
‘अब ढुक्क भयो ।’ उसले भनि र मलाई अंगालो हालेर सोफातिर फर्काई ।
‘ किन ? किन अब ढुक्क हुन्छ ? ‘ मैले सोधें ।
‘मलाई मधु आउंछ जस्तो लाग्यो । आज उसको काम छैन त्यसैले आउन सक्छ । ‘ उसले भनी ।
को मधु ? यो नयाँ पात्र मैले नचिनेको परेछ । किन आउंछ यहाँ ? कतै मधु पनि म जस्तै सेक्स पार्टनर त हैन ? म भित्रको जोस केहि सेलाएर गयो ।
‘मेरो साथी हो मधु । म संग बिहे गर्न खोज्दैछ ।’ उसले मधुको संक्षिप्त जानकारी दिई । मधु जो सुकै होस जे सुकै गरोस मलाई मतलबको कुरा थिएन । तर म संग सुत्न खोज्दैछे अनि अर्को कोहि संग डराउंदैछे । मलाई अञ्जलीदेखि डरलाग्यो । यो खतरनाक हुन सक्छे मेरो लागी भन्ने भयो । त्यसैले मैले पन्सिने उपाय निकाल्नु नै उचित देखें र उठें । मैले पछि भेटेर आजका बाँकी सबै कुरा गरुंला भन्दै बिदा हुन चाहें तर अञ्जलीमा आजै गर्ने अठोट थियो । उ सम्पुर्ण रुपमा तयार भएर सोफामा उत्ताने परेकी थिई । उसले पोटिलो योनिको भित्रि रातो भाग देखाउदै भनि , ‘ तिमी मलाई यस्तो बेलामा कसरि छोडेर जान सक्छौ ? कि तिम्रो माल छैन ? नपुंशक नै हो भने त……..’
अब सवाल मेरो पुरुष्त्वमाथी उठेको थियो । मैले म मर्दछोरा हुं भनेर उसलाई देखाउनु नै पर्ने भयो । त्यसैले म झम्टेर उ माथी जाईलागें । मलाई पनि के थियो र ? एकछिन को मज्जा लुट्नु न हो । मेरो पुरुष्त्वमाथी नै प्रश्न उठ्दा त मैले भोलीको परिणाम सोचेर बस्ने कुरा पनि आएन । मैले आफ्नो कपडा खोलेर सिधै लिंग उसको योनि मा प्रवेश गराउने हिसाबले गएं र उसको स्तनमा मुख गाडेर लिंग प्रवेश गराउन सुरु गरें ।
अञ्जली यहि नै चाहन्थी । उ मलाई सहयोग गर्न तयार भई । अहिले हाम्रो ओठहरु एक आपसमा बन्द ताला झैं जोडीएका थिए । मेरो लिंग अञ्जलीको योनिमार्गमा अझै भित्र भित्र जाने प्रयासमा थियो । हाम्रो संभोगको क्रमले उपयुक्त नपाउंदै ढोकामा खट्खटाहट सुनियो ।
‘बाहिर कोहि आएको छ ।’ मेरो ओठबाट आफ्नो ओठ नहटाई उ बोली ।
‘अरु को हुन सक्छ ? उसकै मधु होला ।’ केहि नबोली मैले सोचें । अञ्जली मलाई यो पटक पनि छोडेर ढोकातिर जाली भन्ने लागेर म उस्लाई अझै कसेर समाउंदै थिएं । मेरो पाखुराको बन्धनले के थाम्थ्यो र उस्लाई । उसले मलाई सहजै आफुबाट अलग गरेर बाहिर गई ।
म आउंदा उ जस्तो थिई अहिले म संगै सुतेको ठाउंबाट उठेर जाँदा पनि त्यस्तै थिई । उसको पहिरन नै यति सजिलो थियो कि उसलाई कतै केहि सम्हाल्नु पर्ने आवश्यकता नै परेन । मेरो भने नाजुक थियो हालत । फुलिएर छाद्न लागेको लिंग एक्कासी योनिबाट निस्कंदाको रन्को त्यसमाथी मैले कपडा लगाएर सम्हालिनु पर्ने अवस्था । ठुलो गाई माथी जति उक्लिंदा पनि काम फत्ते गर्न नसकेको बहर गोरुको जस्तो स्थितीमा मैले कपडा लगाएं । बाहिर ढोकामा आउनेलाई लिएर अञ्जली कोठामा आईपुग्न कति पनि बेर लाग्दैनथ्यो त्यसैले म सोफामै निक्कै सम्हालिएर बसें ताकी मेरो सन्किएको लिंग शान्त रहोस । बाहिर अर्को नारी आवाज सुनियो सायद कोहि अञ्जलीको केटी साथी आएकि थिई । म पुन अञ्जलीको फोटो अल्बम पल्टाउन थालें । केहिबेर पछि अञ्जली आई ।
‘को रहेछ ? ‘ मैले सोधें ।
‘क्रिष्टिना , सपिङ्ग जाने कुरा थियो मैले त भुलेछु । मेरो फोन नउठेर मलाई लिन आएकि रहिछे । गईसकी । अब म तयार हुन्छु । हामी पछि भेट्ने नि ल ? खुब मजा आउंदैथियो । ‘ उसले औपचारिकताका साथ मलाई बिदा दिई । म अझै प्यासी नै थिएं । म भित्रको प्यास मेटिन बाँकी नै थियो तर उसले मलाई बिदा दिईसक्दा मैले त्यहाँ करकाप गर्ने ठाउँ नै रहेन । अघि भर्खरैमात्र मैले उसलाई हात नलगाई हिंड्न खोज्दा उसले नपुंशक हौ कि सम्म भन्न पछि परिन । यदि मैले अहिले उसलाई जबर्जस्ती गर्न चाहेंभने फेरी म नै बलात्कारी हुन बेर लाग्दैन । यो संसारको चलन हो । आईमाईले चाहे भने हामी लोग्नेमान्छे लाई जतिबेला पनि सुताउन सक्छन जतिबेला पनि फसाउन सक्छन तर लोग्नेमान्छेको अवस्थालाई ख्याल गरेर आईमाईले कहिल्यै पनि आफ्नो अनुकुलता नहुन्जेल सम्म सम्भोगको लागी साथ दिंदैनन । जय होस स्वास्नीमान्छेको जस्ले भन्छन हामी लोग्नेमान्छेबाट हेपिएका छौ । आज यसरी अञ्जली संगको रतियुद्धमा हारेर फर्कनु पर्दा मलाई अझै भन्न मन लाग्छ जय होस स्वास्नीमान्छेको ।
Labels: जय होस स्वास्नीमान्छेको